Mid kamida Heshiisyadii TPLF, Cabdi iley & Somaliland ee ONLF kadhanka ahaa & Go’aankii ONLF. | ogaden24
Mid kamida Heshiisyadii TPLF, Cabdi iley & Somaliland ee ONLF kadhanka ahaa & Go’aankii ONLF.
Taliskii Nacabka ahaa ee Kooxda TPLF Adeegahoodii Cabdi iley iyo mamul kusheega Somaliland waxay marar badan Galeen Heshiisyo kadhan ah Jabhada ONLF iyo Guud ahaan shacabka Somaalida Ogadenia.
Heshiisyadani waxaa ay dhigayeen in si iskumid ah loola dagaalamo Jabhada iyo shacabka caadiga ah iyada oo Somaliland loo xil-saaray in ruux kaste oo kasoo jeeda Ogadenia oo lagu Arko deegaamada mamulkaasi ka arimiyo ay soo Qabtaan una soo Gacan Galiyeen ciidamada Itobiya iyo Adeegayaashooda.
Hadaba waxaan Halkan Hoose idiinku soo Gudbinaynaa mid kamida Heshiisyadii dhagaraysnaa oo lagu Qabtay magalada Diridhaba, ayna kawada Qayb Galeen koox kasocotay TPLF, kooxdii Cabdi iley iyo Koox kasocotay mamulka Hargaysa iyo Qodobadii ay kuheshiiyeen ee ay warbaahinta u sheegeen e’ Akhris wanaagsan.
(Hesshiiski 2015/9/19 DIRE DHABA. JDFI, DDS, SLND)
Go’aamadii Kasoo baxay Shirka Golaha Amaanka DDSI iyo Somaliland
Dire-Dawa(CN)Sabti, 19ka September 2015, Sidaad wararkayagii hore kula socoteenba shirkii golaha amaanka DDSI iyo Somaliland ee shalay kafurmay Ras huteel ee maagaalada Dire-Dawa ayaa saaka jawi fiican iyo go’aamo wax ku ool ah oo heshiis qoraal ah lagu kala sixiixday kusoo gabagaboobay.
Go’aamada heshiiskan qoraalka ah ayaa waxaa kala sixiixday Hogaanka Nabadgalyada, Maamulka iyo Cadaalada DDSI mudane Yaasiin Cabdi Waris iyo Wasiirka Wasaarada Arimaha Gudaha Somaliland mudane Cali Maxamed Warancade. Iyadoo go’aamada heshiiskuna ahaayeen in labada dhinacba ay kawada shaqeeyaan dhinacyada: ladagaalanka argagixisada, ladagaalanka nabad-diidka, dhanka daris wanaaga iyo dhaq-dhaqaaqa ganacsiga xorta ah.
Hadaba heshiiskan ayaa waxaa goob-joogayaal uga ahaa dhanka JDFI iyo DDSI: madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, Wasiiru dawlaha wasaarada Arimaha Dibada ee dawlada dhexe mudane Birhane Gebre Kristos, Jananka ciidamada difaaca qaranka ee qaybta koonfur bari itoobiya mudane Abraha, Jananka ciidanka xooga gaarka ah ee DDSI mudane Cabdiraxmaan C/laahi Buraale, hay’adaha kale ee amniga heer deegaan iyo gudoomiyeyaasha gobolada deegaanka. Dhanka Soomaalilandna: wasiirka wasaarada arimaha gudaha mudane Cali Maxamed Warancade, 8 badhisaab iyo 4 janan.
Kala-sixiixashadii heshiiska kadib, ayaa waxaa goobta kahadlay Madaxwayne CMC oo ugu horayn bogaadiyay geedi-socodkii shirkan bilaw ilaa dhamaad una mahadceliyay goobjoogayaasha labada dhinac iyo dawlada federalka ah oo iyadu runtii ah mid had iyo jeer jecel daris wanaaga somaliland. Wuxuuna madaxwaynuhu sheegay in shacabka labada dhinac ay yihiin kuwo aan marnaba kala maarmin, inay nabad kuwada noolaadaana ay daruuri tahay sidaadarteedna ay muhiim tahay in laga ilaaliyo cidii amaankooda waxyeelaynaysa. Isagoo cadeeyay in dawlada federalka ah iyo ta deegaankaba ay kago’an tahay ilaalinta amaanka shacabwaynaha Somaliland iyo in cadawgoodu yahay cadawganaga.
Ugudanbayna, Wasiirka arimaha gudaha somaliland ayaa sheegay inuu kufaraxsan yahay kulankan iyo in go’aamada kasoo baxay ay siday yihiin udhaqangalin doonaan.
Hadaba Mudane Maxamed Cabdi Yasiin Diirane oo kamida madaxda sare ee JWXO ayaa dhankiisa cadeeyay in muwaadiniin kabadan 1070- ay mamulada Somaaliya oo kan Hargaysa u Horeeyo ay cadawga u Gacan Galiyeen.